Accueil > Gazetin'ny nosy > Propagandy : Ifampitadiavana ny kandidà manam-bola
Propagandy : Ifampitadiavana ny kandidà manam-bola
Telo andro androany izao no nanomboka ny fampielezan-kevitra hifidianana izay ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Mangingingina tsy araka ny nanampoizana azy izy ity satria rehefa tena tonga tokoa ny fotoana hisehoana dia lasa nalazolazo indray ny raharaha.
Raha nampitahana tamin’ireo fampielezan-kevitra nisy hatramin’izay dia toa ny tsy misy izany eto Antananarivo. Antananarivo izay taratra ny zavatra rehetra eto Magadasikara.
Amin’ireo antoko sy kandidà 36 izay nanana olona mpilatsaka hofidiana dia kandidà 4 ihany no sahy niseho vahoaka teto Antananarivo hatramin’izao dia Hery Rajaonarimampianina, Andry Nirina Rajoelina, Didier Ratsiraka ary Marc Ravalomanana. Nisy indray kandidà vitsy izay tsy niseho vahoaka fa mampirentirenty fiarakodia manao filaharana sy mizara taratasy ihany sisa ataony. Misy ireo izay tsy hita na teto Antananarivo na tany amin’ny faritany.
Raha ny zava-misy teto Antananarivo no asian-teny dia mihazakazaka mamonjy izay kandidà heveriny fa manam-bola ny vahoaka madinika rehetra. Miandry ny fizaram-bola izy ireny na ny fizarana « tee shirt ». Mian-dahy sy miam-bavy ary mandeha hatramin’ny be antitra sy ny kilonga madinika. Samy miandrandra hahazo zavatra avokoa. Ny fotoana toa izao marina no fanjonoana ireo olona marefo ireo ary anararaotana ny fahantrana mianjady aminy.
Ny tena mampalahelo dia ny fahitana ny olona avy any amin’ny faritra izay tonga eto Antananarivo koa amin’izao fotoana izao. Milaza azy ho olobe sy mpitarika fikambanana izy ireny ary mahavoafehy olona maro avy any amin’ny faritra nihaviany any. Mihazakazaka etsy sy eroa mamonjy ny foiben’ny kandidà tsirairay. Manao angoan-tenda ao milaza izao atsanga tsy aman’orana izao fa afaka mampandresy kandidà amin’ny faritra misy azy. Atao avokoa hatramin’ny fisandohana ho ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ary lehiben’ny fokontany. Rehefa hamarinana nefa dia akory fa lainga fotsiny no lazaina.
Maro amin’izy ireny no tsy manan-kohanina intsony noho ny fahadisoam-panantenana satria tsy nahazo vola. Hita taratra eny amin’ny endriny fa tena reraka ny ankamaroan’izy ireo ka atahorana mafy ny fahasalamany raha jerena ivelany.
Ho an’ny mponina eto Antananarivo indray dia ny mponina sahirana fa indrindra ny ambany tanàna no tena mivezivezy etsy sy eroa. Manatona na entin’ny olona mpitarika azy mamonjy ny foiben’ny antoko na ny kandidà izy ireny. Raha anontaniana ny antony ahatongavany amin’ireny toerana ireny izy ireo dia maro no milaza fa tsy miraharaha izay kandidà, fa ny vola ho azony sy ny akanjo ihany no mahamaika azy.
Fantatra koa fa maro amin’ireo olona mamonjy fizaram-bola sy akanjo ireny no tsy manana karatra sy tsy tafiditra ao anatin’ny lisi-pifidianana akory aza.
Hatramin’izao dia mihidy ny poketran’ny kandidà. Na misy aza ny vola omen’izy ireny dia hita fa ferany amin’ny zavatra voatondro mazava izany. Maro noho izany ny olona diso fanantenana amin’ny fiheverana fa ho maro ny fizaram-bola tamin’ny fampielezan-kevitra. Ny ho avy no mbola tsy fantatra fa hatramin’izao aloha dia tsy misy ny vola amin’ireo kandidà.